डाक्टर बिनाको गैर–कानुनी आनन्द पोलिक्लीनक, डाक्टरको डिग्री फर्जी ?
नक्कली डाक्टर ?
पोलिक्लीनकमा ५ बेडको लागि मात्र दर्ता रहेको स्वीकारे । तर, कानुनी प्रक्रियामा रहेको बताए ।
२०७८ श्रावण १६ शनिबार
बेलुकी ७:२५ बजे
न्यूज ब्यूरो, रौतहट । प्रदेश नम्बर २ को रौतहट जिल्लास्थित एक पोलिक्लीनिक नै गैर–कानुनी रुपमा सँचालनमा रहेको पाइएको छ ।
रौतहटको गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर ५ शिवनगर स्थित रहेको आनन्द पोलिक्लीनिक एण्ड एक्यूपँचर सेन्टर प्रा.लि. नामक पोलिक्लीन गैर कानुनी रुपमा सँचालन हुँदै आएको छ ।
विगत ५ बर्षदेखि नै सँचालनमा रहेको सो पोलिक्लीनिकमा एउटा नै डाक्टर नरहेको बताइएको छ । पोलीक्लीनिकको लागि ५ बेडको सैया सँचालनमा राख्नुपर्ने भएपनि यी पोलिक्लीकमा २५ बेडसम्म सँचालनमा रहेको पाइएको छ ।
पोलिक्लीनिकका चिकित्सक उमेश जयसवालसँग भारतबाट किनेर ल्याएको फर्जी डिग्री रहेको आरोप छ । उनले कोलकत्ताबाट पढेर बिना काउन्सिल नम्बरकै गैर–कानुनी रुपमा पोलीक्लीनकमा विरामी चेकजाँचदेखि उपचारसम्म गरिरहेको बुझिएको छ । यसबारे उनको डिग्रीको सबालमा उनले देखाउन मानेनन् ।
एउटा चिकित्सकको एउटा काउन्सिल नम्बर हुनुपर्नेमा डा. जयसवालले विभिन्न काउन्सिलहरु उल्ल्ेख गरका छन् । एकुपँचर डिग्री गरेर उनले डाक्टर लेख्न नपाएपनि उनले बोर्डमा आफूलाई डाक्टर लेखेका छन् ।
जयसवालले आफूलाई बरिष्ठ डाक्टरको रुपमा परिचय दिँदै आएका छन् । उनले पोलिक्लीनकमा ५ बेडको लागि मात्र दर्ता रहेको स्वीकारे । तर, कानुनी प्रक्रियामा रहेको बताए ।
जानकारी अनुसार, सो पोलिक्लीनकमा एउटा एम.बि.बि.एस. डाक्टरलाई ढाल बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन् । जयसवालसँग फर्जी काउन्सिल नम्बर रहेको बुझिएको छ । यद्यपी, यसबारे उनले केही बोलेनन् ।
केही दिन अगाडी रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोलीले सो पोलीक्लीनकबाट लेटरहेडहरु उठाएर लगेको बुझिएको छ । गैर–कानुनी रुपमा सँचालनमा रहेको सो पोलीक्लीनिकसँग प्रशासन समेत मिलेर गैर कानुनी धन्दा सँचालन गरेको आरोप स्थानीयको छ ।
यता, पोलीक्लीनिकका सँचालक शिव शँकर साहले अस्पतालमा दुईवटा एम.बि.बि.एस. डाक्टर कार्यरत रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार, डा. आरपी यादव र डा अनिल कुमार सो पोलीक्लीनिकमा कार्यरत रहेका छन् ।
पोलीक्लीनिकको मेडिकल अफिसर समेत राखेको भन्दै त्यसको लागि डा. राम प्रगास यादव कार्यरत रहेको दाबी गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको टोलीले केही कागजातहरु लगेको स्वीकार गर्दै चिकित्सकको मार्कसिट, डिग्रीहरु अध्ययन गर्ने भनेर लगेको दाबी गरिएको छ ।
सँचालक साहले जनस्वास्थ्यबाट ५ बेडको मात्र स्वीकृति भएपनि नगरपालिकाबाट २५ बेडको स्वीकृति लिएको दाबी गरिएको छ । यद्यपी, नगरपालिकाले २५ बेड सँचालनको लागि अनुमति दिने कानुन भने नरहेको बुझिएको छ । २५ बेड पनि सँचालन गर्नको लागि जनस्वास्थ्यबाट नै अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
डाक्टर उमेश जैयसवालको सन्दर्भमा सँचालक साहले उनी एक कर्मचारी मात्र रहेको बताएका छन् । उनी डाक्टर नभएर एक्युपँचर मात्र रहेको बताईएको छ ।
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेकी नेतृ जुली महासेठले रामजानकी मटकोर कार्यक्रममा पैसा लुटाएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । एमालेकी केन्द्रीय सदस्य जुली महतोले मंगलवार गंगासागरमा आयोजित मटकोर
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेकी नेतृ जुली महासेठले रामजानकी मटकोर कार्यक्रममा पैसा लुटाएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
एमालेकी केन्द्रीय सदस्य जुली महतोले मंगलवार गंगासागरमा आयोजित मटकोर विधिमा पैसा लुटाएको भन्दै व्यापक आलोचना गरिएको छ ।
अन्य समय जनकपुरधाममा आउँदा सर्वसाधारण संग पुरा मुख नबोल्ने केन्द्रीय सदस्य महतो भने आगामी चुनावलाई मध्यनजर गर्दै सर्वसाधारणको बीच गई पैसा लुटाई रहेको देखिएको छ ।
स्थानीय पत्रकार विजय साह भन्छन्–‘जुली महतोज्यू, यो बार डान्सर वा नर्तकी होइनन् । विवाह पञ्चमीको इतिहासमा यस्तो दृश्य देखिएको थिएन । तपाईंले बार डान्सर वा गायकलाई टिप्स दिदा यसरी पैसा छर्केर दिनु भएको होला । तरिका मन परेन । मान्छु तपाईंसँग धेरै पैसा छ ।’
नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्व मन्त्री रघुविर महासेठकी श्रीमती तथा उद्योग पति उपेन्द्र महतोकी बहिनी जुलीले पैसा लुटाई रहेको दृश्यले धेरैले आलोचना गरेका छन् ।
सीताराम महोत्सवमा प्रत्येक बर्ष जनकपुरधामवासीले धूमधाम तथा हर्षोउल्लासका साथ मनाउने गरेका छन् । तर, यस्तो दृश्य भने आज सम्म नदेखिएको जनकपुरधाम उप– महानगरपालिका–१ बस्ने विन्देश्वर साह बताउँछन् ।
यो हाम्रो संस्कृति होइन्, काठमाण्डूको होटल, रेष्टुरेन्टको संस्कृति हुन सक्ने भन्दै उनले आक्रोश पोखेका छन् । उनले भने–‘चुनावको अग्रीम तयारी हुँदैछ, तर हाम्रो संस्कृति र परम्परालाई मानमर्दन गर्ने कार्य स्वीकार्य हुँदैन् ।’
सोही सँगै समाजिक सँजालमा सधैँ चर्चामा रहने भीम उपाध्यायले पनि जुली महासेठको त्यो अवतारालाई आलोचना गरेका छन् ।